Esi lelee bọọlụ n'efu | Gam akporosis
Paul Aparicio | | Ngwa gam akporo, gụgharia, Gam akporo Ndị aghụghọ, Nkuzi
Afọ ole na ole gara aga, ndị televishọn mpaghara mpaghara nwere ike ịhọrọ egwuregwu ọ bụla ga-enye kwa izu. N'afọ ndị ahụ (ọmarịcha) afọ anyị nwere ike ijide n'aka na ọ bụrụ na a na-egwu kpochapụwo ma ọ bụ egwuregwu na-atọ ụtọ, anyị ga-ahụ egwuregwu ahụ n'èzí. Ugbu a, a na-enyekwa egwuregwu egwuregwu kwa izu, mana nke a abụghịkarị, nke kachasị mma, egwuregwu kachasị mma n'izu. Iji nwee ike ịhụ egwuregwu na-atọ ụtọ n'ezie anyị ga-akwụ, ma ọ bụ nke ahụ bụ tiori; nwere ike lelee bọọlụ n’efu nke ọtụtụ ụzọ.
Enwere ọtụtụ ngwa na-atọ ụtọ nke ga-enye anyị ohere ile bọọlụ n'efu site na ngwaọrụ gam akporo anyị, ma ihe ọjọọ bụ na ha na-eji ndepụta ma ọ bụ usoro na-akwụsị ịrụ ọrụ site n'oge ruo n'oge. N’isiokwu a anyị ga-ekwu maka ọtụtụ ngwa ndị a, ọ bụ ezie na naanị ihe anyị nwere ike ikwe gị nkwa bụ na ha niile ga-akwụsị ịrụ ọrụ n’ọdịniihu, na-atụ anya na ọ ga-adị anya. Anyị ga-amalite ikwu banyere TV España + Fútbol, ​​ikekwe nke kachasị ekwe nkwa.
? Gbalịa ọnwa efuNweta ọnwa efu nke bọọlụ na DAZN na enweghị nkwa ọ bụla na ịpị ebe a
1 Lelee bọlbụ n'efu na TV Spain + Football
2 Etu ibudata ma wụnye TV España + Fútbol
4 Egwuregwu amamihe
6 Ọwa P adịchaghị
Lelee bọlbụ n'efu na TV Spain + Football
Kedu ihe TV España + Fútbol na-enye anyị? Ọfọn, dị ka aha ya na-egosi, na ngwa a anyị nwere ike ịlele ọwa bọọlụ. Iji kọwaa nke ọma, ihe ọ na-enye anyị bụ -ahụ niile TV ọwa na Spain, ndị so na ha gụnyere ọwa bọọlụ ndị na-agbasa eze egwuregwu na Spain.
Na mbu, ngwa a gha enyere anyi aka ileba bọọlụ site na ngwa gam akporo anyị, mana anyị nwere ike igosipụta ọdịnaya niile dị na Chromecast ma ọ bụ ngwaọrụ / sistemụ ọ bụla dakọtara ile ya na tiivi n’ime ime ụlọ anyị.
Etu ibudata ma wụnye TV España + Fútbol
Dị ka ọtụtụ ngwa nke ụdị a nke bara uru, anyị ga-ebudata ngwa ahụ .apk site na mpụga Google Play, nke pụtara na nwụnye ya adịghị mfe dịka sistemụ gọọmentị dị. Iji zere mgbagwoju anya, anyị na-akọwa usoro ị ga-eso:
Site na ngwaọrụ gam akporo anyị, anyị na-emepe ihe nchọgharị weebụ ọ bụla nke na-enye anyị ohere ibudata faịlụ.
Anyị na-enweta njikọ a.
Anyị na-enweta na «Download na ihe nchọgharị». Dị ka ọ dị na MEGA, nbudata ahụ nwere ike ịda, nke anyị ga-ebudata faịlụ ahụ na kọmputa wee ziga ya na ngwaọrụ gam akporo anyị site na akwụkwọ ozi, dịka ọmụmaatụ.
Na .apk faịlụ na ngwaọrụ gam akporo anyị, anyị na-agba ya.
O yikarịrị, ọ ga-adọ anyị aka ná ntị na anyị nwere nkwarụ nhọrọ iji wụnye ngwanrọ sitere na isi mmalite ndị a na-amaghị. Ọ bụrụ na nke a bụ ikpe, anyị ga-arụ ọrụ ya, nke anyị nwere ike ime site na windo ịdọ aka ná ntị ahụ ma ọ bụ na ọ ga-akpọrọ anyị ozugbo na ntọala, anyị ga-arụ ọrụ ahụ ma ọ ga-amalite ịwụnye.
Anyị na-enye ya iji wụnye, anyị na-anabata ọkwa ma anyị chere.
Ugbu a, ị ga-ahọrọ ọwa na ngwa iji lelee ya. Ihe kachasị mma bụ na anyị na-ahọrọ ihe nchọgharị ahụ wee họrọ ihe nchọgharị ahụ ọzọ ma ọ bụ ngwa ndabara vidiyo nke ngwaọrụ. Ọ bụrụ na nke a anaghị arụ ọrụ, ị ga-anwale usoro nke na-arụ ọrụ. Ọwa na-arụkarị ọrụ. N’okpuru, ị nwekwara vidiyo nkọwa.
Dịka m gwara gị na mbido post a, ọ ga-abụ na ọtụtụ ngwa ndị na-enye anyị ohere ile bọọlụ n'efu na gam akporo ngwaọrụ anyị ga-akwụsị ịrụ ọrụ n'oge ụfọdụ n'ọdịnihu. N'iburu nke a n'uche, ikekwe ihe kachasị mma echefula banyere ụzọ ochie. Ruo ogologo oge na amaghị m mgbe anyị na-ekwu okwu, enweela ọrụ ndị dị ka Justin TV ma obu Ustream, ndị otu a na-agbasa na ibe weebụ dịka ama Roja Directa. Anyị nwere ike ịchọ ngwa ngwa nke ụdị weebụsaịtị a mgbe niile, ma ọ bụ jiri otu izugbe.
Ngwa m na-ekwu maka ya bụ Livestream, nke enwere ike ịkọwa dị ka Periscope mana nke ahụ anaghị achọ ka e jiri ekwentị mkpanaka dekọọ vidiyo ahụ, ya bụ, onye ọrụ ọ bụla nọ n'ụwa nwere ike ịgbasa ihe ha na-ele na TV ha ma anyị ga-ahụ ndị ọzọ nwere oke mma.
Echiche bụ ịchọ otu ihe omume mgbe anyị chọrọ ịhụ egwuregwu. Dị Mfe, ma dị irè n'ọtụtụ oge. Nke kachasị mma, anyị nwere ike iji ya na gam akporo ngwaọrụ yana n’ihe ọ bụla na ngwaọrụ ndị ọzọ nwere sistemụ arụmọrụ.
Egwuregwu amamihe bụ ngwa nke anyị nwere ike ịhụ ndepụta nke ọwa, nke nwere akụkụ ya dị mma na nke na-adịghị mma: akụkụ dị mma bụ na anyị nwere ike ịchọta ndepụta nke nwere ọtụtụ ọwa, gụnyere ụfọdụ ndị na-enweghị ihe jikọrọ ha na ikiri bọọlụ n'efu. Akụkụ na-adịghị mma bụ na anyị ga-enyocha ndepụta ndị dị n'ịntanetị na mgbe ụfọdụ ọ naghị adị mfe ịchọta ha. N'ezie, ọ bụrụ na anyị ahụ ha, anyị ga-enwe ọ theụ bọọlụ kacha mma na ọwa ndị ọzọ n'efu.
Echefukwala ibudata ya football wiseplay ndepụta inwe ike ihu ihe omume egwuregwu kachasị mkpa: ochie, derbies, final na ọtụtụ ndị ọzọ.
Ngwa ọzọ yiri na ihe niile na TV España + Fútbol bụ nke FreeDirect. O yiri nke a n'ihi na anyị agaghị ahụ ya na Google Play, ọ bụ ihe yiri ya n'ihi na anyị ga-agbanye nhọrọ iji wụnye ngwa sitere na isi mmalite amaghi na ọ yitere n'ihi na anyị ga-enwe ọtụtụ ọwa ịhọrọ, mana echere m na ọ bụghị dị ka nke mbụ n'ime nhọrọ. nke anyị ga-ekwu maka ya na post a. N'ọnọdụ ọ bụla, ọ bara uru itinye ya. Anyị nwere ike ibudata ya na EGO.
Ọwa P adịchaghị
Anyị na-akwụsị na Ọwa P adịchaghị, nhọrọ dị oke mma dị site na Aptoide, ọmụmaatụ. Mana kpachara anya, ị ga-eburu n'uche ihe ole na ole: ị ga-ahọrọ ụdị nke gonzalo-rodriguez, nke anyị nwere ike ịlele ọtụtụ ọwa akwụ ụgwọ n'efu. Nhọrọ ndị ọzọ adịghị mma ma ọlị. N'aka nke ọzọ, ọ bara uru iji ọdịnaya n'ihu lee ọdịnaya ahụ, ebe ọ bụ na site n'oge ruo n'oge ụfọdụ mgbasa ozi na-egosi na ihuenyo zuru oke. N'ọnọdụ ọ bụla, ọ bụ nhọrọ ọzọ bara uru ịtụle.
Ndị a abụrụla atụmatụ anyị ga-enye gị ohere ịlele bọọlụ n’efu na ngwa gam akporo. Anyị achọghị ikwu okwu n’echeghị echiche ọ bụla onye ọ bụla ga-aza ajụjụ maka omume ha ma ọ bụrụ na ha kpebie ịwụnye ngwa ndị ebudatara na mpụga nke Google Play. Onweghi ihe na - eme, mana anyi nwere ike ichota .apk na koodu agbanwetara ma wepu onwe anyi na ihe ojoo.
Enwere ngwa ndị gara aga enyere gị aka? Ọ bụrụ na ị bịarute ebe a ma ị nweghị ụzọ ị ga-esi na-ele bọọlụ n’efu, cheta na site na nkwalite a ị nwere ike ịnụ ụtọ DAZN maka otu ọnwa n'efu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » gụgharia » Esi lelee bọọlụ n'efu na ọwa TV niile na Spain ỌR WOR ỌR !! !!
Alberto Martin Hernandez dijo
Site na njikọ gị enwere m nje
Zaghachi Alberto Martin Hernandez
Akwa isiokwu. Ọwa ndị na-aga na Live Stream Player dị mma maka m, mana ndị nke UC Browser anaghị arụ ọrụ ọ bụla. M etinyela nsụgharị UC Browser maka mbadamba (ebe ọ bụ na m na-eji ya na ụdị ngwaọrụ a) n'ihi na nke predefined site na TV España + Fútbol ngwa adịghị adaba. Ihe ngwọta ọ bụla? Daalụ nke ukwuu.
Were nwayọ budata ya na ọ bụghị nje. Anyị onwe anyị anwalewo ya.
Ọ gaghị ekwe ka m nwee njikọ ọ na-ezitere m ozugbo na ụlọ ahịa egwu iji budata Mega na mgbe m nwara ọtụtụ oge enwere m nje ahụ
Lelee nke a, ị ga - ama otu esi esi budata faịlụ sitere na Mega. https://www.androidsis.com/truco-android-como-descargar-contenido-alojado-en-mega-sin-tener-instalada-la-aplicacion-para-android/
Ok daalụ ugbu a ee
Ọ bụrụ na m kwuo na m nwere nje, ị na-aza ozi m gara aga?
Mgbe ị na-achọ ịwụnye ya na-ekwu ịwụnye wee ... Ngwa awụnyeghị
Roman Cesar Castillo Gaytan dijo
You nwere ndị nke Mexico ?? 🙂
Zaghachi Roman Cesar Castillo Gaytan
Aurelio Picon Lopez dijo
Nke a bụ malware. Earned nwetala ihe anaghị akwụ ụgwọ.
Zaghachi Aurelio Picón López
Enweghị enyi malware.
Ọ bụghị ozugbo na ngwa ahụ, mana njikọ dị n'ime ngwa iji hụ ọwa bụ akwu nke mines. I tufuola m ugbu a, mana ego tupu m aga, na-anwa izere ụdị ọdịnaya a anaghị enyere gị aka, belụsọ na ị bụ ndị na-erite uru na njikọ ndị a ...
UC Browser na-etinye ihe ọ bụla ọ chọrọ na ọnụ ya, gụnyere ụlọ nyocha na facebook, n'onwe m echeghị m na ọ nwere nje ọ bụla, mana ọ bụ ngwa intrusive.
Banyere ngwa ahụ n'onwe ya ile bọọlụ anya, eziokwu ahụ na ọ na-eme ya site na ibe weebụ na-eme ka ị gụọ ọtụtụ peeji mgbasa ozi na ọ bụghị njikọ ọwa niile na-arụ ọrụ. M kpọrọ ihe ngwa a na-ezighị ezi na ihu ọma nke ndị ọzọ ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
Mgbe m kwusịrị azịza abụọ, enweghị m ihe ọzọ ma ọ bụghị ịme ya na ịkwụsị ịkekọrịta na ịtụ aro ibe a. Site na mfe ọ ga-abụrịrị ịme okwu dịka "Anyị nwere nwute, mana anyị amaghị otu esi edozi nsogbu gị."
Bịa, ezigbo echiche onye na-ejikwa nkọwa.
Ezigbo enyi bụ na amaghị m ihe ị na-ekwu, ị na-ekwukarị banyere obi abụọ ma ọ bụ ajụjụ ndị na-ebilite, ọbụlagodi n'oge ụfọdụ na nsogbu ndị siri ike m na-eme ya ọbụlagodi na nzuzo.
Apụghị m ịhụ nova na ụfọdụ ọwa zipu mkpanaka gị na ihe nchọgharị na peeji a na-akpọ tutono…. Kedu ihe m ga - eme iji nwee ike ihu nova site na ekwentị m?
N'okwu gị, iji lelee Nova ịchọghị ngwa a ma ọlị, budata onye ọrụ gọọmentị na-emeghị ihe ọjọọ ma ị ga-ahụ mmemme Atresmedia niile na ekwentị gị, gụnyere NOVA:
Also nwekwara ngwa ndị ọzọ dịka:
Ọfọn, M ... ike gwụrụ m na-ele ịgba bọl jerkily ma ọ bụrụ na ọ bụ egwuregwu dị mkpa ọ nweghị ụzọ isi hụ ya. Enwetara m Acestream, Sopcast, Xbmc ma ọ bụ Kodi, Splive player na ọ nweghị onye nwere ụzọ iji hụ ya nke ọma. Ka anyị ghara ikwu mgbe ọ bụ egwuregwu dị mkpa. Ebe ahụ ka ị na-atụ egwu. Ọ bụ ya mere m ji tinye Movistar football na Imagenio ma kemgbe ahụ akwụsịrị m ige ntị na bọlbụ na redio.
Etinye akpa gị na n'ikpeazụ ị ga-enweta ahụ ike.
Ndewo m ga-achọ ịma ebe m nwere ike ibudata ngwa tv nke Spain + football ekele
Andres Hernandez Puche. dijo
Maazị Francisco Ruiz: Abụ m onye na-eso ụzọ na-ebi akwụkwọ kwa ụbọchị. Ekwesịrị m ịsị na ị naghị aza WhatsApp egosipụtara.Ajụjụ m jụrụ gị bụ ma ọ bụrụ na ejiri Cast ọ bụla tinye na Samsung TV enwere m ike ịhụ ihuenyo nke ekwentị m nke otu ụdị J7 (2016). Enwere App? Ekele m na ekele gị nke ukwuu.
Zaghachi Andrés Hernández Puche.
M gbasoro usoro niile iji wụnye TV Spain + football, mana ọ naghị mụta otu ọwa, ọ na-eziga m ka m mepee eriri! Amaghị m ihe kpatara m ga-achọ azịza ma ọ bụ na ọ bụ na a ga-akwụ ụgwọ ngwa a ma ọ bụ ihe ọzọ abụghị ngwa anaghị akwụ ụgwọ dịka ha na-ekwu na vidiyo ka esi etinye ya! Ọ jọkarịrị na enwere m obi nkoropụ na echere m na ọ ga-arụ ọrụ maka m mana mba?
Enwere m ekele maka ozi gị. Ọ ga -enye aka n'ezie. Ekele
Google Na-eweputa Teknụzụ Ya Na-atọ Totọ Iji Walite Foto Ndị Dị Ala
Igodo iji lekọta batrị nke ekwentị gị